खबर मञ्च, Author at खबरमञ्च - Page 4302 of 4415 खबरमञ्च
You are here: Home > Articles by खबर मञ्च - Page 4302
By खबर मञ्च / July 13, 2016 / छापामा / Comments Off on सरकार टिकाउन ओलीलाई ४५ सिटको आवश्यकता
काठमाण्डौं । नेकपा माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएपछि वर्तमान केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई बहुमत पुर्याउन ४५ सिटको आवश्यकता परेको छ । ओली सरकारले विश्वासको मत मागेर ४५ सिट प्राप्त गर्न सफ भए उनी प्रधानमन्त्री कायम रहने छन् । संसदमा गत २४ असोजमा भएको प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा ओलीले ३ सय ३८ मतले विजयी भएका थिए, जसमा माओवादी केन्द्रको […]
डा. केसीलाई राष्ट्रिय चिकित्सक संघको समर्थन
By खबर मञ्च / July 12, 2016 / स्वास्थ्य / Comments Off on डा. केसीलाई राष्ट्रिय चिकित्सक संघको समर्थन
काठमाण्डौं । राष्ट्रिय चिकित्सक संघ नेपालले आइओएमका प्राध्यापक डा. गोविन्द केसीको अनशनलाई समर्थन जनाएको छ । संघले आज विज्ञप्ती जारी गरी डा. केसीले आठौं अनशनमा उठाएका मागमा सहमती जनाउदै एक्यवद्धता व्यक्त गरेको जनाएको छ । संघले स्वास्थ्य क्षेत्रको बेथिती अन्त्यका लागि आफ्नो दायित्व पुरा गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।
क्यान्सर बारे ‘भविष्यवाणी’ गर्ने नयाँ तरिका पत्ता लाग्यो
By खबर मञ्च / July 12, 2016 / स्वास्थ्य / Comments Off on क्यान्सर बारे ‘भविष्यवाणी’ गर्ने नयाँ तरिका पत्ता लाग्यो
एजेन्सी । चिकित्सकले वंशाणुगत परीक्षण गरेर स्तन क्यान्सर भएका महिला सुरक्षित छन् वा छैनन् भन्ने थाहा पाउन सकिने एक नयाँ अध्ययनले देखाएको छ । सो परीक्षणबाट महिलाको क्यान्सर शरिरभर फैलिन्छ वा फैलिदैन भन्ने विषयमा वास्तविक ढंगले अनुमान गर्न सकिने बताइएको छ । खोजकर्ताले यसलाई ‘ब्रेष्ट क्यान्सरमा ब्रेकथ्रु’ भनेका छन् । विद्यमान परीक्षण (अनकोटाइप डीएक्स ) दुई साता […]
चालीस हजार बिरुवा वितरण
By खबर मञ्च / July 12, 2016 / समाज / Comments Off on चालीस हजार बिरुवा वितरण
पाँचथर । जिल्ला वन कार्यलयले विभिन्न प्रजातिका ४० हजार बिरुवा वितरण गरेको छ । कार्यालयका सूचना अधिकारी ललितकुमार कर्णका अनुसार भू–क्षय र पहिरोबाट सुरक्षित रहन वृक्षारोपण गरिएको हो । टिक १० हजार, खोटे सल्ला सात हजार, धूपी सल्ला तीन हजार, अमेरिकन सल्ला सात हजार, खयर दुईहजार ५०० र तेजपत्ता १० हजार बिरुवा कृषकलाई वितरण गरेको […]
बसपार्कबाटै चोरीयाे बस
By खबर मञ्च / July 12, 2016 / समाज / Comments Off on बसपार्कबाटै चोरीयाे बस
जनकपुर । जनकपुरको बसपार्कबाट एउटा बस चोरी भएको छ । जनकपुरबाट जटही चल्ने ना १ ख ९५७९ नम्बरको शुभ यात्रा ट्राभल्सको बस चोरी भएको बस सञ्चालकले जनाएका छन् । बसमा कोहि नभएको बेला बिहान ११ बजेतिर चोरी भएको बस सञ्चालक जटहीका रोहित चौधरीले बताए । सेतो रंगको बस बसपार्कबाटै चोरी भएपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषामा खोज […]
By खबर मञ्च / July 12, 2016 / समाज / Comments Off on डा. गोविन्द केसी अस्वस्थ
झापा । चिकित्सा क्षेत्र बेथिति र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीलाई महाअभियोग सिफारिस गर्न माग गर्दै तीन दिनदेखि त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा अनसनरत् डा. गोविन्द केसीको स्वास्थ्यस्थिति बिग्रेको छ । डाक्टर केसीलाई सास फेर्न अप्ठेरो हुने, मुटुको धड्कन बढ्ने, पिसाब कम हुनेलगायत समस्या देखिएका छन्। केसीको स्वास्थ्य जटिलतालाई मध्यनजर गर्दै मंगलबार बिहानदेखि स्लाइन […]
झापामा राप्रपाप्रति युवा आकर्षण बढ्दाे, २० दिनमा झण्डै एक सय युवाले गरे राप्रपा प्रवेश